Android 10, yekutanga vhezheni ye Android kusiya masweets | Linux Vakapindwa muropa
Iyi mwedzi, tanga tichitsikisa matikiti pa Android Q, inotevera vhezheni yeGoogle nhare yekushandisa. Takazviita nekuti, kubvira yekutanga vhezheni, kambani yeinjini yekutsvaga yakakurumbira yaisanganisira zita rekuti rinotapira kuperekedza zita reiyo sisitimu yekushandisa uye kubva kuA yeApple Pie ivo vakateedzera arufabheti. Android 9.0 yaive Pie, saka isu takatarisira inotevera vhezheni yeApple kuve Android Q-chimwe chinhu, asi Google yatove Yakazivisa iro zita reiyo inotevera vhezheni ichave Android 10.
Muchidimbu, ivo vanozoshandura zita kuitira kuti isaburitse nyonganiso. Kune vagadziri vayo, kusarudza zita rekuti zvihwitsi yaive tsika yakava inonakidza, chimwe chinhu chakaita kunge kune vamwe vashandisi, asi vamwe vakanyunyuta kuti mazita achangoburwa aisanzwisiswa nguva zhinji neruzhinji rwevanhu. Semuenzaniso ivo vanoisa kuti iyo L uye iyo R inonzwika zvakafanana mune mimwe mitauro. Kune rimwe divi, vashandisi vatsva vanonzwa zita rekuti rinotapira kekutanga, chimwe chinhu chakanyanya kunzwisisika kupfuura nhamba
Android 10, nekuti manhamba akatsanangurwa zvirinani kupfuura zvihwitsi
Android inowanikwa pamhando dzese dzemidziyo chero kupi zvako pasi, saka zita rinofanira kunzwisiswa pasirese. Uye ivo vanonzwisisa kuti "marshmallow" inotapira kwazvo, asi munyika dzakaita seSpain vazhinji vedu tingadai tisingazive zvavari kutaura nezvazvo dai isiri iyo yeGhostbusters bhaisikopo; kunyangwe tichinge tazviona, vazhinji vedu hatina kumboona marshmallow muhupenyu hwedu hwose. Chaizvoizvo, chinangwa kana uchichinja zita ndizvozvo zvakafanana usanzwe zvakasiyana zvichienderana nenyika.
Kunze kwezita, ivo vachachinjawo logo. Kunyanya zvakanyanya, iwo mavara ezvinyorwa. Kubva ikozvino zvichienda mberi, iyo yemavara mavara mavara anozoshanduka kuita nhema pane yegirini kwadziri vakajaira. Iko shanduko diki, asi nhema inoverengwa zvirinani pane girini, zvirinani kune vanhu vane mashoma ekuona maziso. Google ichatanga kushandisa logo nyowani mumavhiki anotevera, zvichienderana nekuvhurwa kwekupedzisira kwezvava kuziva kunzi Android 10.
Ini ndinofunga zita shanduko rakanaka. Sezvauri kuzviona?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Android 10, yekutanga vhezheni yeApple kusiya masweets
Zvinogona kudaro, pachezvangu ndinoifarira zvirinani nenhamba, zita rezvinotapira raizove iro kiyi kana zita repiri.